YEYINTNGE(CANADA): Sunday, September 20
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/20/20090အကြံပြုခြင်း
Peace, Democracy and Human Rights in Asia Conference
Zoya Phan spoke at Peace, Democracy and Human Rights in Asia Conference. 11 September 2009, Prague.
Photo by: Vlada Liscak
Zoya Phan’s speech on “Religious, Cultural and Indigenous Rights”
Thursday, September 17, 2009 at 7:42pm
International Conference for Peace, Democracy and Human Rights in Asia.
11 September 2009, Prague.
It isagreat honor for me to be invited again this year and speak to you today. I would like to thank President Václav Havel and Forum 2000 forakind invitation and I would like to thank His Holiness the Dalai Lama forawonderful and inspiring message.
Burma is one of the most ethnically and religiously diverse countries in the world. Our people have different histories and different cultures. We have different languages, clothing, traditions and food. Buddhist, Christian, Muslim and Animist live side by side.
But instead of this being celebrated and encouraged, throughout our history Burmese kings,ademocratic government, and since 1962amilitary dictatorship, has tried to crush these different cultures. They want to make everyone like the main Burman ethnic group. They are prepared to go to any lengths to achieve this, even committing war crimes and crimes against humanity.
I am ethnic Karen, and my family is Animist. I was 14 years old when the Burmese Army came to my village and attacked. We ran for our lives, just as more thanamillion Karen people have also run for their lives in the past 60 years. Those Karen who live in areas of Burma under the rule of the dictatorship cannot freely speak their language, and cannot learn the history of their own people. Gradually, as generation after generation live like this, the Karen lose their culture and identity.
This oppression hasn’t just taken place under military rule. Before the British colonised Burma Karen people faced the death penalty just for being able to read. There isalake in Burma, Meiktila Lake, which in Karen means Falling Tears. It was named this by the Karen because thousands of our people were used as slaves to build it, and thousands of them died.
It isn’t just the Karen who suffer this way. Other ethnic groups, Kachin, Karenni, Chin, Arakan, Mon, Shan, Rohingya and many others also face having their cultures and traditions destroyed.
Next year there will be elections in my country. Some say that this may be an opportunity for change. They couldn’t be more wrong. Not only will the elections be rigged, it also brings inanew constitution that has been carefully drafted to maintain and legalise dictatorship. That is bad enough. But what it means for ethnic people is even worse. There is nothing to protect or promote ethnic people and our culture. We are given no genuine autonomy. I believe, this constitution isadeath sentence for ethnic diversity in Burma.
As I speak major new military offensives against ethnic people are taking place in Burma, as the generals seek to crush opposition. Seven thousand more people have been forced to flee their homes in Karen State, ten thousand Shan people have fled for their lives in central Shan State. And almost 40,000 ethnic Kokang were forced from their homes when the Burmese Army attacked an armed group that hadaceasefire with the regime, but still refused to surrender their guns and be taken over by the Burmese Army.
In the next few weeks and months you will see more reports of attacks like this, against the Wa, the Kachin and the Karenni. Any ethnic organisation that resists the will of the generals, be they freedom fighters or drug lords, will be attacked. Nothing will be allowed to stand in the way of this new constitution, continued military rule, and the Burmanisation of our country.
It is time government woke up to the fact that the generals ruling my country will never willingly hand over power. They are not going to agree toagenuine transition to democracy. The new constitution is proof of that. These generals are committing war crimes and crimes against humanity. Softly softly diplomacy doesn’t work. They need to be treated like the criminals they are. They should be prosecution by the international criminal court.
Their vision of Burma isadictatorship with what they call ‘one blood’, where only one culture, theirs, exists.
But our movement hasadifferent vision for Burma. We wantafederal Burma, where our cultures are protected. A country where all the cultures and religions of Burma live side by side. Regardless of our ethnicity, religion, gender and race, we all are equal and should be treated equally. Where our diversity is seen asastrength, and something to be proud. Where we can be different, but equal.
I asked last year and I ask again, please help us.
The Voice 5-46(September Issue)
လက်ရှိမြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ရခိုင်ပြည်အမျိုးသားကောင်စီ (ANC) သဘောထား ထုတ်ပြန်ကျေညာချက်
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/20/2009 1 အကြံပြုခြင်း
မနေ့ကအထိ ရရှိသော သတင်းများအရ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၁၁၀ အထိ ရှိသွားပြီ ဟု AAPP ၏ ထုတ်ပြန်ချက်များအရ သိရပါသည်။ ယနေ့လွတ်မြောက်လာသူများထဲတွင် ထင်ရှားသော သရုပ်ဆောင် နှင့် နာဂစ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင် ခဲ့သူ ကိုဇာဂနာ လွတ်မြောက်လာပြီဟု သိရပါသည်။နာဂစ် ကူညီရေးလုပ်ငန်းများကို တက်ကြွစွာဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၄င်း၏ ပြတ်သားထိရောက်စွာ ဝေဖန် ပြောဆိုမှုများကြောင့် အီလက်ထရောနစ်အက်ဥပဒေ၊ နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေးနှင့် ဗီဒီယို အက်ဥပဒေများဖြင့် အမှုဆင်ကာ ထောင်ဒဏ် ၄၅ နှစ် ချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။ကိုဇာဂနာနှင့်အတူ အမှုတွဲ ဖြစ်သော ကိုဇော်သက်ထွေး နှင့် အခြားသူများလည်းပါသည်ဟုသိရပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းများ ပြည်သူသုံးလမ်းမများကိုဆန္ဒပြနေရာအဖြစ် ၁၉၇၃ အောက်တိုဘာလ(၁၄)မှသည်ယ္ခုအထိအသုံး ပြုခဲ့သည်မှာ အကြိမ်ပေါင်းထောင်ချီခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ခြေလျှင်လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြခြင်းနှင့်အတူ ပစ်ကပ်ကါးများဖြင့်၎င်း (သို့)သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များဖြင့် ၄င်းလှည့်လည်ဆန္ဒပြခြင်းစသည့် အားလုံးသောပုံစံမျိုးစုံ လူထုစုစေးလှည့်လည်မှုတို့ သည် ဘန်ကောက်မြို့တွင်း မြို့ပြင်လမ်းမများကိုအသုံးပြု၍ နိုင်ငံရေးအနေအထား တခုကို ဖေါ်ထုတ်ပြသခဲ့ကြသည်။ တခါတရံ အလွန်ကျယ်လောင်သော လော်စပီကာများပင် ပါဝင်သေးသည်။
ပဋိပက္ခများသည် ဒီမ်ိုကရေစီ လူ့အဖွဲ့အစည်း၏အစိတ်အပိုင်း နှင့်ပါဆယ်ထုတ်ဖြစ်ပေသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် နိူင်ငံရေး တွေ့ဆုံးဆွေးနွေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် ပဋိပက္ခအား အဖြေရှာခြင်းသည် အစိုးရတရပ်ဆက်လက် တည်တံ့နိုင်ရန်မရှိ မဖြစ်အရေးကြီးသည့် အကြောင်းရင်းဖြစ်လာသည်။ ယင်းသည်ရွေကောက်ပွဲ၊ ပါလီမာန်၊ သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် ထက်ပင် အရေးကြီးပါသည်။
ဒီမ်ိုကရေစီရှင်သန်ကြံ့ခိုင်နိုင်ရန်အတွက် ပဋိပက္ခများသည် လွတ်လပ်စွာထွက်ပေါ်လာနိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စ အထမြောက်ရန် ပြည်သူလူထုအတွက် အခွင့်နေရာထားပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ၄င်းသည်အနည်းစုများ၏ ဆန္ဒထုတ် ဖေါ်ရာဆုံရပ်အဖြစ် အသုံးတော်ခံမည်ဖြစ်သည်။ ၄င်းသည် ပြည်သူ့ရေးရာ ပေါ်လစီအဖြစ်ကြောင်းလဲ ရန်မျှော်လင် နိုင်သည့် လူထု၏တောင်းဆိုတင်ပြချက်များကို ကြားနာရန်မဏ္ဍိုင် တခုလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
အများပြည်သူသုံးလမ်းမများသည် ဤအမျိုးအစားမျက်နှာစာတရပ်ဖြစ်သည်။ တချိန်တွင်စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်း စဉ်သို့တက်နိူင်ရန်အတွက် ဖိအားပေးရာတွင် ထိုလမ်းမများသည် အလွန်လည်းထိရောက် အသုံးတည့်ကြသည်။
သို့တိုင်အောင် ဒီမိုကရေစီစည်းမျဉ်းများအောက်တွင် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများဖြစ်မြောက်ရန်အတွက် လမ်းမများသည်သာ မျက်နှာစာဖြစ်ကြသည်မဟုတ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှ အခြားမျက်နှာစာများကို လူထုမျက်နှာစာများအဖြစ် မလာနိူင်ခဲ့လျှင် သာဆန္ဒပြတောင်းဆိုသူများသည် လမ်းမများကိုအသုံးပြု၍ ပေါ်လစီချမှတ်သူများကို ဖိအားပေးရန် မိမိလိုချင်သော အချက်ကို တောင်းဆိုရန်ပိတ်ဆို့ကြရခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုင်းဒီမိုကရေစီ၏ မပြည့်စုံမှုသည် အသပြာနိုင်ငံရေးမဲဝယ်မှုနှင့် လူထု၏စိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါးခြင်း (ဥပေက္ခာပြုခြင်း) တို့ကြောင့်မျှသာမဟုတ်ဘဲ လူထုပါဝင်နိုင်ရန်နေရာမရှိခြင်း၊ မျက်နှာစာဖွင့်မပေးခြင်းက ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပါဝင်နေပေသည်။
လက်ရှိယန္တယားတွင် ပြည်သူလူထုအတွက်လမ်းကြောင်းအချို့ရှိသည်မှာ မှန်ပါသည်။ သို့သော်အများစုမှာ အလုပ်မ ဖြစ်ပါ။ အမှန်တကယ်တွင် ပုံမှန်လမ်းကြောင်း၏ အများစုသည် စေ့စပ်ညှိုနှိုင်းရန် ဖြစ်နိုင်ချေအနည်းငယ် (သို့)လုံးဝ မရှိသည့်အနေအထားတွင် ရှိနေသည်။ ဒီမိုကရေစီအလုပ်ဖြစ်နိူင်ရန်အတွက် လမ်းမများအပြင် အခြားအနည်းဆုံးမျက် နှာစာ ၇ ရပ်ကို ကျွန်ုပ်စဉ်းစားမိပါသည်။ ဤမျက်နှာစာများကို လူထုအတွက်ဖွင့်ပေးခြင်းဖြင့် သူတို့၏မတူညီသော တွေးခေါ်မှုနှင့် မကျေနပ်ချက်များကိုဖေါ်ထုတ်ရန် အားပေးနိူင်သည့်အပြင် ပြည်သူ့ရေးရာ ပေါ်လစီချမှတ်ရာတွင် ပါဝင်ခွင့်ပေးရာလည်း ရောက်ပေသည်။
အီလက်ထရောနစ်မီဒီယာက်ို အစိုးရနှင့်စီပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်များမှ အုပ်စီးထားပြီးရှိခြင်းကြောင့် မရှိနွမ်းပါးသူများ အတွက် ရင်ဖွင့်ရာနေရာ(သို့) ထိန်းညှိဖွယ်ကြိယာအဖြစ်အသုံးခံရန် ကြာရှည်ဖြစ်နိူင်ဖွယ်မရှိတော့ချေ။ ပို၍လွတ်လပ် မှုရှိသည်ဟု ပြောနိူင်သောပုံနှိပ်မီဒီယာတွင်ပင် အစိုးရနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအာဏာပြင်ပရှိ လူများအတွက် ဆုံရပ်တပ်ခုအဖြစ် အကျိုးဆောင် မပေးနိုင်ကြပါ။ ထိုအနိမ့်စားပြည်သူများ (အလုပ်သမားအသေးစားလုပ်ငန်းရှင်လယ်သမား)အတွက် ဤမျက်နှာစာကို အသုံပြုပြီ်း စေ့စပ်ညှိနိူင်းနိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ရန် ဖြစ်နိူင်ချေရှိပါသလား။
၂။ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ယန္တယားများ
ဤမျက်နှာစာတွင် အမျိုးသားလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်၊ အမျိုးသားစီးပွါးရေးနှင့် လူမူရေးအကြံပေးကောင်စီ ကဲ့သို့ လွတ်လပ်သောအဖွဲ့အစည်းများပါဝင်ပါသည်။
အဆိုပါလွတ်လပ်သောအဖွဲ့အစည်းများသည် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးအတွက် အရေးကြီးသော မျက်နှာစာအဖြစ်တည်ရှိပြီး အချို့ပြည်သူလူထုအနေနှင့် အတိတ်ကာလ အောင်မြင်မူတချို့ရခဲ့သော်လည်း များစွာထိရောက်လုံလောက်မူရှိသည်ဟု ဆို၍မရနိုင်ပါ။ အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာ လက်လှမ်းမမှီနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ကျေးလက်ဆင်းရဲသားများ အတွက် ပိုခဲခက်ပါသည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်းများသည် ထိန်းညှိစရာကြိယာ အဖြစ်ထက် စေ့စပ်ညှိနိူင်းရေးကြိယာ အဖြင့် သာ ပိုအသုံးတည့်ပါသည်။
နိုင်ငံရေးပါတီများသည် တစ်နိူင်ငံလုံး (သို့) ဒေသအလိုက်ရှိ နိူင်ငံရေးသမားများ၏ အစုအဝေးဖြစ်သည်။ ၄င်းတို့တွင် လူထုအခြေခံမရှိသည့်အပြင် ရှိနိူင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်လည်း မဲ့နေပြန်သည်။ သူတိုကိုဘဏ္ဍာထောက် ပံ့သူများမှလွဲ၍ အခြားသူများအား ကိုယ်စားမပြုကြ။ ဤအခြေအနေအောက်တွင် ကျေးရွာသားများအနေနှင့် မိမိတို့ အကျိုးစီးပွါးအတွက် ရပ်တည့်ပေးရန် ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများအား ဖိအားပေး၍ အကျိုးမထူပါချေ။ ဤနည်းဖြင့် နိူင်ငံရေးပါတီများသည် အထွေထွေပြည်သူလူထုအဘို့ ပေါ်လစီရေးညှိနိူင်းဆွေးနွေးရာ စင်မြင့်ဖြစ်လာရန်လမ်းမရှိချေ။
ပါတီဖျက်သိမ်းချင်းသည့်လည်း အထွေထွေပြည်သူလူထုအဘို့ အနည်းငယ်သာ ထိရောက်မူရှိပါသည်။ နိူင်ငံတော်ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရားရုံးက ပါတီဖျက်သိမ်းရန် အမိန့်ပေးသည့်တိုင် ပါတီပိုင်ရှင်တို့သည် အချိန်မရွေးဖျက်သိမ်း ခြင်း၊ အသစ်တစ်ခု ထူထောင်ခြင်းများလုပ်နိူင်ပေသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံဥပဒေအဖွဲ့အစည်း၊ ဆေးကော်စီ၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူများအစည်းအရုံးစသော လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း များ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်သည် ဥပဒေကိုဂရုမစိုက်မှု၊ မှားယွင်းစွာအသုံးပြုမှု(သို့) အလွှဲသုံးစားပြုမှုမှ ကါကွယ်ရန် သာဖြစ်သော်လည်း လက်တွေ့တွင် သူတို့လုပ်ငန်းများသည် ပြည်သူ့ ရေးရာပေါ်လစီနှင့် အပြန်အလှန် ဆက်စပ်နွယ် ငင်လျှက်ရှိသည်။ ၄င်းအဖွဲ့အစည်းများသည် မိမိတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်ကို လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိ ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အကျိုးစီး ပွါးအား ကာကွယ်ရုံသာဟု ကန့်သတ်မထားသင့်ပါ။ ယင်းအစားဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းများနှင့်ဆက်စပ်ပတ် သက်မှုရှိနေသော ပြည်သူ့အကျိုးကို အရင်ရှေ့တန်းတင်စဉ်းစားသင့်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် ယင်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝိုင်းဝန်ကူညီမှု လုံးဝမရှိကြောင်း ဝမ်းနည်းစွာဆိုပါရစေ။ ဤသည်က ခလေးသူငယ်များ၏ လိင်အင်္ဂါကို ဖြစ်တောက်ရန် စိတ်အာထက်တန်သောဆရာဝန်များရှိနေခြင်း (သို့)အများပြည်သူ၏ အခွင့်အရေးနှင့်တကိုယ်ရေ လွတ်လပ်မှုကို စဉ်ဆက်မပြတ် လက်လွတ်စပယ်ချိုးဖေါက်နေသော သတင်းမီဒီယာများရှိနေခြင်း စသည်တို့၏ အကြောင်းအချက် ပင်ဖြစ်သည်။
ခေတ်သစ်လူအဖွဲ့အစည်းတွင် များစွာသောအုပ်စု၏ အကျိုးစီးပွါးများသည် အပြန်အလှန်ဒွေးရောယှက် တင်ဖြစ် သည်။ သမဂ္ဂများသည် ပေါ်လစီအဆင့်ဆွေးနွေး ညှိနိူင်းမှုများလုပ်ရာတွင် ပိုင်နိုင်ထိရောက်သော ကြိယာဖြစ်နိုင်ပါ သည်။ သို့ဖြစ်၍ ရှောင်တခင်ပေါ်ပေါက်လာသော မိမိသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်များ၏ အကျိုးစီးပွါးပြဿနာထက် ပို၍အရေးကြီး၊ ကြီးမားသောပြဿနာများ အတွက်လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အကျိုးနှင့်ပြည်သူ့အကျိုးတို့ထပ်တူမဖြစ် သည့်အချိန်များရှိပေသည်။ ထိုအခါများတွင်သမဂ္ဂတို့သည် အဖွဲ့ဝင်များ၏ ဘက်တွင်သာရပ်တည်ပြီး အပြောင်းအလဲကို ဆန့်ကျင်သည့်ဘက်သို့ ဦးလှည့်သွားလေ့ရှိသည်။ ပညာရေးစနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး (သို့) ပြည်သူ့လုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်းများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြည်သူတို့၏ အခန်းကဏ္ဍကိုပစ်ပယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။
ကျောင်းများ၊ တက္ကသိုလ်များ၊ ပြတိုက်များ (သို့) အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းများတို့သည် မိမိတို့ဆိုင်ရာဌာနများတွင် ပိုမိုတ ခါးဖွင့်ပြီး ပြည်သူ့အရေးကိုလေ့လာရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အစိုးရ (သို့မဟုတ်)စီပွါးရေးအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းရန်ကိစ္စ ရပ်များကိုသာ လေ့လာသုသေတနပြုရေး၌သာ မိမိတို့ကိုယ်ကို ကန့်သတ်မထားသင့်ပါ။ သုတေသနဌာနတခုသည် စပါးစိုထိုင်းမှု တိုင်းတာအရေးကြီယာအတွက် ဆောင်ရွက်နေစဉ်မှာပင် ယင်းကြိယာဈေးချိုရေးနှင့် လယ်လင့်တကူ ဝယ်ယူနိူင်ရေးတို့ကို တွဲဆောင်ရွက်နိူင်ပါသည်။ တချိန်စာရင်းတွင် အရောင်းစပါးများ စိုထိုင်းဆ လျှော့ချနိုင်ရေး အတွက် လယ်သမားများကိုကူညီရာတွင်လည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်ပါသည်။
ထိုအဖွဲ့အစည်းများသည် တိုက်ရိုက်ရွေးကောက်ပွဲဖြင့် တက်လာသည့်တိုင်အောင် ဒေသခံပြည်သူများ၏ အခွင့် အရေးနှင့်အကျိုးစီးပွားများအတွက် ရှေ့တန်းမှရပ်ခံတိုက်ပွဲဝင် ကာကွယ်သူများဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ အောက်ခြေဆန္ဒသဘော ထားများကို ဗဟိုပေါ်လစီချမှတ်သူများသို့ ပေးပို့ဖြည့်သွင်းရမည့်အစား ဒေသခံအဖွဲ့အစည်း၏ ကိုယ်စားလှယ်တော်များ သည် မိမိအတွက်အများစု မည်မျှရနိုင်သည်ကိုသာ အများစုအချိန်ကို အသုံးချနေလေသည်။ ဥပမာအာဖြင့် မိမိတို့နယ် မြေအတွင်း ကျောင်းသုံးပြဌာန်းစာအုပ် ဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးရေးကိစ္စတွင် သဘောမတူခင် ဦးစွာပြည်သူလူထုသဘောထားကို မေးမြန်းသင့်ပါသည်။ ဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ဝေသော ဤပြဌာန်းချက်များကို ကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား၊ ထပ်မံဖြည့်စွက် လိုသော အကြောင်းအရာ စာရင်းရှိပါသလား၊… စသဖြင့်။ ဤကဲ့သို့လုပ်နိင်လျင် သူတို့သည်နိုင်ငံ၏ ပညာရေးပေါ်လစီ တွင် ပြည်သူလူထု၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအတွက် နေရာမှန်ကို လမ်းဖွင့်ပေးရာ ကျပါလိမ့်မည်။
အထက်တွင်ဖေါ်ပြထားခဲ့သည့်အတိုင်း ဤဥပမာခုနှစ်ရပ်သည် ထိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် အလုပ်မဖြစ်ခြင်း(သို့)အပြည့် အဝ အလုပ်မတွင်ခြင်းတို့ရှိနေပါသည်။ ဤသို့ဖြစ်လျက် ကျွန်ပ်တို့၏ လမ်းများပေါ်တွင် ကားများပြားလွန်း၍ လမ်းပိတ် ဆို့ခြင်းထက် ရည်ရွယ်ချက်တခုခုပေါ်တွင် လမ်းမများကိုသိမ်းပိုက်ခြင်း မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်နေရခြင်း၏ အကြောင်းရင်း ကို အံ့သြတော့မည်မဟုတ်ပါ။
ပြဿနာမှာ ပြည်သူလူထုများ လွတ်လပ်စွာနှင့် လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်သော အခြားဒီမိုကရေစီမျက် နှာစာများမရှိခြင်း ကြောင့် လမ်မများသည် သြဇာကြီးမားသောအုပ်စုများ၏ ပြောင်းလဲမှုမှ အကျိုးအမြတ်ရနိုင်ရေး စိတ်ဝင်စားမှုကို ရှေ့ပြေးဖေါ်ထုတ်ရာ ဆုံရပ်များဖြစ်လာနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ လမ်းမပေါ်က နိုင်ငံရေးသည် ဒီမိုကရေစီတရပ်၏ အခြားမျက် နှာစာများကို ထင်သာမြင်သာ ရှင်းလင်းမှုမရှိဘဲနဲ့ ပိတ်ပင်လိုက်နိုင်ပါသည်။ လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြသူများကို အင်အား သုံး၍ (သို့) ဖြောင်းဖျနှစ်သိမ့်၍ ဖယ်ရှားရေးသည် ဒီမိုကရေစီ၏ လိုရင်းအချက်မဟုတ်ပါ။ အဓိကပြဿနာမှာကျွန်ပ်တို့ ၏ ဒီမိုကရေစီရေး တိုးတက်မြင့်မားရန် ဒီမိုကရေစီ၏ အခြားမျက်နှာစာများအား မည်သို့တွန်းတင်ဖွင့်ပေးရမည်ဆိုသည် ပင်ဖြစ်သည်။
(သမိုင်းပါမောက္ခ နီဒီအီဆီဝမ်(Nidhi Esseewang)၏ (11/6/08)နေ့ထုတ် ဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းစာပါ၊ (Street and other spaces for Democracy)ဆောင်းပါးကိုဘာသာပြန်သည်။
- ကေအန်ယူတပ်မဟာ(၆)၏ ဧရိယာအနေအထားကတော့ ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ် မြို့နယ်ကျုံဒိုးကား လမ်းကနေ ကော့ကရိတ်မြို့၊ နောက်မြဝတီမြို့ကားလမ်း တောင်ဖက်ပိုင်းဖြစ်ပြီး၊ အဲဒီကနေ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တလျှောက်ကဘုရား သုံးဆူမြို့အထိဖြစ်ပါတယ်၊၊ အနောက်ဖက်ပိုင်းမှာတော့ ဘုရားသုံးဆူမြို့ကနေ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်၊ တခုလုံးဖြစ်ပါ တယ်၊၊ အဲဒီဒေသကို ကေအန်ယူတပ်မဟာ(၆) ဧရိယာအဖြစ် ကေအန်ယူ(ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး)ကသတ်မှတ် ထားပါတယ်၊၊
- ဒီကေအန်ယူတပ်မဟာ(၆)ရဲ့ ဧရိယာအထဲမှာ လှုပ်ရှားနေတဲ့ တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတော့၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်၊ ဇမိချောင်းအနောက်ဖက်ခြမ်းမှာ လှုပ်ရှားနေတဲ့ ဒုတိယဗိုလ်မှုးကြီး တင်လှိုင်ဦးစီးတဲ့ တပ်ရင်း(၁၆)၊ ဇမိချောင်းအရှေ့ ခြမ်းမှာ လှုပ်ရှားနေတဲ့ ဒုတိယဗိုလ်မှုးကြီး ဖါးခေါ့ဦးစီးတဲ့ တပ်ရင်း(၁၇)၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ် တောင်ဖက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှား နေတဲ့ ဒုတိယဗိုလ်မှုးကြီး ကို့ထူးဦးစီးတဲ့ တပ်ရင်း(၁၈)တို့ လှုပ်ရှားနေပါတယ်၊၊ တခါ ဒေါနတောင်အရှေ့ခြမ်း၊သင့်ပေါဖိုး (ဖလူး)မှာ လှုပ်ရှားနေတဲ့ ဗိုလ်မှုးလှမင်း ဦးစီးတဲ့ တပ်မဟာ(၆) အထူးတပ်ရင်းနဲ့ ဗိုလ်မှုးစောဗူးဖေါ် ဦးစီးတဲ့ကေအန်ယူ ဗဟိုအထူးတပ်ရင်းရှိနေပြီး၊ ဒုတိယဗိုလ်မှုးကြီး ဖါးနင့်ဦးစီးတဲ့ ကေအန်ဒီအို တပ်ရင်း(၆)လည်း လှုရှားနေကြောင်းသိရ ပါတယ်၊၊ စုစုပေါင်းအင်အားကတော့ တပ်ရင်း(၆)ရင်းဖြစ်ပြီး လူအင်အားအနေနဲ့ ပြောရရင်တော့ လူအင်အား(၁ဝဝဝ) တထောင် လောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းကြပါတယ်၊၊ ကေအန်ယူ တပ်မဟာ(၆)မှုးကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ဆာမိဖြစ်ပြီး၊ တပ်မဟာ ဗျူဟာမှုးကတော့ ဗိုလ်မှုးကြီးစောဂျိုးစွာဖြစ်ပါတယ်၊၊
- ကေအန်ယူတပ်မဟာ(၆) ဧရိယာကို စစ်ဆင်ဖို့အတွက် နအဖအရှေ့တောင်တိုင်းကနေ ဒီကေဘီအေ(တိုးတက်သော ကရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတပ်ဖွဲ့) တပ်မဟာ(၅)ကို တာဝန်ပေးထားပါတယ်၊၊ အဲဒီတပ်မဟာ(၅)မှာပါတဲ့ တပ်ရင်းတွေကတော့၊ ကရင်ပြည်နယ်ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်၊ ခလယ်တံခွန်တိုင်မှာရှိတဲ့ ဒုတိယဗိုလ်မှုးကြီးဥာဏ်မင်း ဦးစီးတဲ့ တပ်ရင်း (၉ဝ၆)၊ ဘုရားသုံးဆူမြို့နားက မဲကသကျေးရွာမှာအခြေစိုက်တဲ့၊ ဒုတိယဗိုလ်မှုးကြီးနိုင်လွင်(ခေါ်) စောနယ်လယ်ဟေး၊ ဦးစီးတဲ့တပ်ရင်း(၉ဝ၅)၊ ထီးဖိုးသံရွာမှာ အခြေစိုက်တဲ့ ဗိုလ်မှုးကြီးစောဘလူး၊ ဦးစီးတဲ့တပ်ရင်း(၉ဝ၁)၊ အစွန်းရွာမှာ အခြေစိုက်တဲ့ ဒုတိယဗိုလ်မှုးကြီးစောကျော်ကျော် ဦးစီးတဲ့တပ်ရင်း(၉ဝ၄)၊ မြဝတီမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ စောနော်တရာ ဦးစီးတဲ့ တပ်ရင်း(၉ဝ၇)၊ တွေကလှုပ်ရှားနေပါတယ်၊၊ ကေအန်ယူတပ်မဟာ(၆)မှာ ရှိတဲ့ဒီကေဘီအေ တပ်မဟာ(၅) အင်အားကတော့ တပ်ရင်း(၅)ရင်းမှာ လူအင်အားစုစုပေါင်း (၆ဝဝ)လောက်ရှိပါတယ်၊၊ ဒီကေဘီအေတပ်မဟာ(၅)မှုး ကတော့ ဗိုလ်ချုပ်စောလာဖွယ်(ခေါ်) နှုတ်ခမ်းမွှေးဖြစ်ပြီး၊ ဒုတိယတပ်မဟာမှုးကတော့ ဗိုလ်မှုးကြီးစိန်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်၊၊ ဒီကေဘီအေ တပ်မဟာ(၅)တွင် စစ်ဗျူဟာနှစ်ခုရှိပြီး၊ ဗိုလ်မှုးကြီးမော်သိုးနဲ့ ဗိုလ်မှုးကြီးစောဘလူးတို့က ဦးဆောင်နေ ပါတယ်၊၊
- ကေအန်ယူတပ်မဟာ(၆)ကို စစ်ဆင်ဖို့အတွက် နအဖကလည်း စစ်ဗျူဟာ(၄)ခု ခင်းကျင်းထားတာရှိပါတယ်၊၊ကျိုက်ဒုံ မှာအခြေချနေတဲ့ စကခ(၁၂)က နည်းဗျူဟာ(၁)ရှိပါတယ်၊၊ သူ့လက်အောက်မှာ တပ်ရင်း(၃)ရင်းရှိပါတယ်၊၊ တခါကြာ အင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် အနန်းကွင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့ အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ စစ်ဗျူဟာ(၂)လည်းရှိနေပါတယ်၊၊ သူ့လက်အောက်မှာလည်း တပ်ရင်း(၃)ရင်းရှိပါတယ်၊ နောက်ပြီး၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့ပေါ်မှာက အရှေ့တောင်တိုင်းစစ် ဌာနချုပ်ရဲ့ စစ်ဗျူဟာ(၁)ရှိနေပါတယ်၊၊ အလားတူဘဲ ကော့ကရိတ်မြို့မှာလည်း စကခ(၁၂)ရဲ့ နည်းဗျူဟာက ရှိနေပါ တယ်၊၊ စုပေါင်းလိုက်ရင် ကေအန်ယူတပ်မဟာ(၆) ဧရိယာထဲမှာ စစ်အစိုးရတပ်ဖွဲ့က လေးဗျူဟာတောင်ရှိနေတဲ့အတွက် တပ်ရင်းအားဖြင့် (၁၂)ရင်းရှိနေပါတယ်၊၊ လူအင်အားနဲ့ပြောရရင် လူအင်အားက (၁၅ဝဝ)လောက်ကိုရှိနေတာပါ၊၊ ဒါ တောင်ဧည့်တပ်တွေမပါ သေးပါဘူး၊၊ အထူးသဖြင့် တပ်မ(၂၂)နဲ့ တပ်မ(၄၄)က တပ်ဖွဲ့တွေကလည်း လိုရင်လိုအပ်သလို စစ်ကူတွေ ပေးနေတာရှိပါတယ်၊၊
- စစ်အစိုးရရဲ့ ဒီကေအန်ယူတပ်မဟာ(၆)စစ်ဆင်ရေးကို သုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်၊ လူအင်အားကိုက နအဖတပ်နဲ့ဒီကေဘီ အေနှစ်တပ် ပေါင်းလိုက်ရင် (၂ဝဝဝ)ကျော်နေပါပြီး၊ ဒါတောင်ဧည့်တပ်တွေမပါသေးပါဘူး၊၊ ကေအန်ယူတပ်မဟာ(၆) မှာက အများဆုံးနှုန်းနဲ့ တွက်ရင်တောင်မှ လူအင်အား(၁ဝဝဝ)သာရှိနေတာပါ၊၊ လက်နက်အင်အားချိန်ခွင်လျှာကိုကြည့် ရင်လည်း၊ တချိန်ကလက်နက်ကြီးအင်အား သုံးနိုင်ခဲ့တဲ့ကေအန်ယူဟာ အခုဆိုရင် မတွေ့ရသလောက်ကိုဖြစ်နေပါပြီး၊၊
- စစ်ဗျူဟာအရကြည့်ရင်လည်း၊ နအဖဟာ ကေအန်ယူတပ်တွေကို ဒီကေဘီအေတပ်နဲ့ဘဲ ထိပ်တိုက်တိုးစေပါတယ်၊၊ နအဖတပ်ကတော့ အရံသဘောလောက်သာ လှုပ်ရှားနေပါတယ်၊၊ ပြီးတော့အချက်အချာကျတဲ့ ကရင်ရွာတွေကို စခန်း ချတဲ့နည်းနဲ့ နေရာယူပြီး ကေအန်ယူတပ်ဖွဲ့တွေ လှုပ်ရှားနယ်မြေဂွင် ကျင်းလာအောင် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်၊ ကရင်ရွာ တွေကိုလည်း ကရင်လူမျိုးတမျိုးတည်းသာ နေထိုင်ဖို့နအဖတပ်တွေက ကျေးရွာရယက တွေကိုညွှန်ကြားနေပါပြီး၊၊ မွန် လူမျိုးတွေရောတဲ့ရွာတွေကိုတော့ နေခွင့်ပြုပေမဲ့ အခြားလူမျိုး တွေရောနေရင်တော့ မြို့ပေါ်ပြောင်းခိုင်းနေတယ်လို့ကြား သိရပါတယ်၊၊ အဲဒါကကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် ထဲကတောပိုင်းကျတဲ့ရွာ တွေကိုအဲဒီလိုလုပ်နေခဲ့တာပါ၊၊ လိုအပ်ရင်ကျေး ရွာတွေကို စုစည်းလိုက်ပြီး၊ ရွာသားတွေကို ကေအန်ယူတွေနဲ့ အဆက်ပြတ်နေအောင် လုပ်ထားနေပါတယ်၊၊
- ကေအန်ယူတပ်ဖွဲ့တွေကတော့၊ စစ်ရေးအရ ဒီကေဘီအေတပ်ဖွဲ့ကို ရှောင်နိုင်သမျှရှောင်ပြီး၊ နအဖတပ်ဖွဲ့တွေကိုတော့ ပျောက်ကြားနည်းနဲ့ ထိပ်တိုက်တိုးစေပြီး အထူးသဖြင့် မိုင်းနဲ့စစ်ဆင် တိုက်ခိုက်နေခဲ့ပါတယ်၊၊ အကယ်၍နအဖကထိုးစစ် ဆင်လာခဲ့ရင်လည်း ကေအန်ယူက မိမိတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကို အပျောက်ဖျောက်ပြီး၊ နအဖတပ်ပြန်အဆုတ်မှာပြန်လည် တိုက်ခိုက်တဲ့နည်းကို ကျင့်သုံးမယ်လို့ကြားသိရပါတယ်၊၊ ဒါပေမဲ့လို့နအဖက ဒီကေဘီအေကိုသာ ရှေ့တန်းတင်ပြီး လှုပ်ရှားနေတဲ့အတွက် ကေအန်ယူတွေခင်ဗျာ၊ အခက်တွေ့နေရတယ်လို့ စစ်ရေးအကဲခတ်တွေက ဆိုနေကြပါတယ်၊၊
Peace, Democracy and Human Rights in Asia Conferen...
လက်ရှိမြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ရခိုင်ပြည်...